छोराछोरी कस्ता ? बाबुआमा जस्ता ! | चितवन पोष्ट
छोराछोरी कस्ता ? बाबुआमा जस्ता !
एउटा बच्चालाई देख्नासाथ मैले उसको अनुहारमा उसका बाबुआमा, दाजुभाइ र घरपरिवार देख्छु । यदि बच्चाको अनुहारमा हाँसो छ भने सोच्छु, उसको घरमा हँसिला बाबुआमा छन्, हँसिला दाजुभाइ छन् र वरपर हँसिला साथीहरु छन् । यदि चिन्ताग्रस्त अनुहार छ भने सोच्छु, उसका बाबुआमा दुःखी छन्, चिन्तित छन्, दाजुभाइ र साथीसँगी सबैबाट उसले अनुहार अँध्यारो बनाउने नकारात्मक ऊर्जाभन्दा केही पाएको छैन । उसको अनुहारमा यदि डर र त्रास छ भने सोच्छु, ऊ घरभित्र निर्भय हुन सकेको छैन, दाजुभाइ, बाबुआमा वा इष्टमित्र कसैबाट पनि उसले त्रासमुक्त हुने ढाडस पाउन सकेको छैन । यदि मैले बच्चाको अनुहारमा ईष्र्या, द्वेष र बदलाको भावना छ भने सोच्छु, घरपरिवारमा ईष्र्याद्वेषको वातावरण छ । एकले अर्काप्रति द्वेषईष्र्या गर्ने स्थिति छ । बच्चाको अनुहारमा मैले यदि शान्ति, आनन्द, प्रेम र प्रसन्नता देखेँ भने सोच्छु, उसका बाबुआमा शान्त छन्, प्रेमपूर्ण छन्, उज्याला छन् । कुनै पनि कुराको खाँचो छैन । यदि कुनै बच्चाले अपशब्द बोल्छ, झगडालु स्वभाव देखाउँछ र अमर्यादित हर्कत गर्दछ भने ठान्छु, उसको घरमा अपशब्द बोल्ने बाबुआमा छन्, दाजुभाइ, इष्टमित्र वा छरछिमेकी र साथीभाइ छन् ।
त्यसो त, घरपरिवार र छरछिमेकीबाहेक विद्यालयबाट पनि बच्चाले धेरै कुरा सिकेको हुन्छ । यदि घरमा सभ्य, शिष्ट र मर्यादित अवस्था हुँदाहुँदै पनि बच्चाले अपशब्द, अश्लीलता अभिव्यक्त गर्दछ भने विद्यालयमा पनि त्यस्ता साथीहरु छन्, गुरूहरु छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन, तर बच्चाको संस्कारमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका घरपरिवारको हुन्छ, बाबुआमाको हुन्छ, विशेष गरी आमाको हुन्छ ।
सच्चा अभिभावकले जहिले पनि आपूmलाई आदर्श ठान्नुपर्दछ । बालबालिकाले सबैभन्दा आमाबाट, त्यसपछि बाबाबाट, त्यसपछि विद्यालयबाट र त्यसपछि साथीभाइहरुबाट सिक्ने गर्दछ । अर्थात्, घरपरिवारबाटै उसले आवश्यक संस्कार सिक्ने भएको हुँदा घरपरिवारका सबै सदस्य आप्mनो छोराछोरी अथवा बच्चाको संस्कार निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अभिभावक कहिल्यै पनि बालबालिकाका अगाडि आप्mना विचार, चिन्तन र निर्देशनहरुमा विचलित हुनुहुँदैन । साना भए पनि उनीहरुले हामीलाई पढ्न सक्छन्, बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । हामीले दुई दिनअघि एक प्रकारको कुरा ग¥यौँ, दुई दिनपछि अर्को कुरा ग¥योँ र तेस्रो दिनपछि फेरि अर्कै कुरा ग¥यौँ भने बालबालिका अलमलमा पर्छन् । हामीले भनेका कुरा विश्वास गर्न र त्यसअनुसार व्यवहार गर्न पनि छाड्छन् किनकि ठीक के हो, बेठीक के हो ? उनीहरुलाई थाहा नै हुँदैन ।
कहिलेकाहीँ खुसीको वातावरण सिर्जना हुन्छ । पुरस्कार, प्रशंसा प्राप्त भएको हुन्छ । पदोन्नति भएको अथवा अर्थलाभ या अन्य कुनै सफलताको समाचार हुन सक्छ, त्यतिखेर हामी अभिभावक खुसी हुने कुरा सामान्य हुन्छ । हामीसँगै हाम्रा बालबालिका पनि खुसी हुन्छन् । तर, त्यो खुसी हाम्रो अनुहारबाट निस्कँदा सम्हाल्नै नसक्ने किसिमको देखिनुहुँदैन । बालबच्चाले हामीलाई हाम्री आमा अथवा हाम्रा बाबा चाहिनेभन्दा धेरै खुसी हुने गर्नुहुन्छ, अथवा मात्तिने गर्नुहुन्छ भनेर भन्न नपाओस् ।
कहिलेकाहीँ समस्याहरु आउँछन् । कसैको निधन हुन सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ । कसैले डरधम्की दिएको हुन सक्छ, त्यतिखेर हामी दुःखी हुनुहुँदैन । हामी दुःखमा विचलित हँुँदैनौँ, हुनुहुँदैन भन्ने सन्देश हाम्रो अनुहारबाट छोराछोरीले पढ्न सकू्रन् । हामी हाम्रा बच्चाका आदर्श हौँ, हिरो हौँ । हिरोहरु कहिल्यै पनि समस्यामा आत्तिँदैनन् । यदि हामीलाई तिनले समस्यामा आत्तिएको देखे भने फेरि कहिल्यै हामीलाई हिरो मान्न सक्दैनन् ।
दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने कुरा बालबच्चाका अगाडि कहिल्यै पनि गर्नहुँदैन । चाहे सुखको अवस्था होस्, चाहे दुःखको अवस्था होस्, अनुहारमा एकै प्रकारको ओज, तेज र प्रभाव होस् । चाहे विचारमा होस्, चाहे चिन्तनमा होस्, चाहे उनीहरुसित डिल गर्दा होस्, हाम्रा छोराछोरीसित हामी स्थिर अनि एकनास भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ । दुःखमा पनि मेरी आमा अथवा मेरा बाबा विचलित नभई काम गर्नुहुन्छ र सुखमा पनि धेरै मात्तिनुहुँदैन भन्ने बालबालिकाले महसुस गर्नुपर्दछ ।
बालबालिकाले सधैँ राम्रै गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन । जीवन एउटा लामो सिकाइप्रक्रिया हो । हामी सबै विद्यार्थी हौँ । हाम्रा छोराछोरी त झन् पक्का शिक्षार्थी हुन् । उनीहरुले सधैँ एकै प्रकारको सफलता पाउँछन् भन्ने हुँदैन । कहिले असफल, कहिले सफल, कहिले विशिष्ट श्रेणी, कहिले उत्तीर्ण श्रेणी । पढाइका क्रममा छोराछोरीका अनेक उतारचढावहरु आउँछन्, त्यतिबेला पनि स्थिर भएर उनीहरुसित प्रस्तुत हुनुपर्दछ । उनीहरुको असफलतामा गाली, असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्दा अवस्था सप्रिनभन्दा झन् बिग्रन्छ ।
यस्तो अवस्थामा त झन् उनीहरुलाई राहत चाहिन्छ, ढाडस र साथ चाहिन्छ । ‘तिमी आत्तिनुहुँदैन, काम गर्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । अर्कोपटक मेहनत गरे भइहाल्छ नि’ भनेर भन्नुपर्दछ । यसो गर्दा दुःख र असफलतामा पनि मलाई साथ दिने र हौसला दिने मान्छे छन्, मेरा बाबाआमा हुनुहुन्छ भन्ने भावना उनीहरुभित्र विकास भएर जान्छ । थोरै नम्बर ल्याउँदा गाली गर्ने, अरुसित तुलना गर्ने, तल देखाउने र राम्रो ल्याउँदा चौपट्टै प्रशंसा गर्ने गर्दा हाम्रा छोराछोरीले हामीलाई नम्बरकै लागिमात्रै बाँचेको भन्ने ठान्न सक्छन् । ‘मेरा बाबा वा मेरी आमालाई नम्बर भए पुग्छ, अरु केही चाहिँदैन’ भन्ने बुझे भने के होला ?
हरेक अवस्थाहरुमा हामीले हाम्रो विचारमा, भावनामा, कर्ममा स्थिरता र समता ल्याउन प्रयास गर्नुपर्दछ । दुःखमा अस्थिर नभई आनन्द र शान्तिका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बालबालिका पनि हामीजस्तै दुःखसुखमा आत्तिने र मात्तिने खेलभन्दा माथि उठ्न सक्ने बन्दछन् । यो एउटा लिडरको पहिचान पनि हो । आखिर हामी घरका नेता नै हौँ । नेता नै आफ्नो विचार, निर्देशन र व्यवहारमा अस्थिर भयो, समस्याहरुमा खुट्टा कमायो भने छोराछोरीमा पनि त्यो अस्थिरता बढेर जाने सम्भावना हुन्छ ।
कडा अनुशासनलाई निषेध गर्नुस्
अभिभावकमा अभिमानको ठूलो दम्भ हुन्छ । बालबालिकामा पनि हुन त हुन्छ, तर त्यो इगो त्यस्तो डरलाग्दो र कठोर हुँदैन । उनीहरुले कहिल्यै पनि प्रतिशोधपूर्ण अभिमान राख्दैनन् । ठूला मान्छेहरुलाई साना–साना कुरामा पनि ठूलो भाउ चाहिन्छ । बालबालिकाले आपूmले भनेको शतप्रतिशत मान्नैपर्छ भन्ने छैन । यदि हामीले भनेका कुरा हाम्रा छोराछोरीले भनेको मानेनन् भने त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनु जरूरी हुन्छ । हामीले भनेका कुरा उनीहरु सुहाउँदो भएन र मानेनन् कि ? हामीले भनेका कुरा सबै राम्रै, सबै सुन्दर र ठीक हुन्छन् भन्ने हाम्रो मात्रै मान्यता पो हो कि !
कहिलेकाहीँ हामीले बोलिरहेका बेलामा बालबालिकाले होहल्ला गरेका हुन्छन्, राम्ररी सुनेका हुँदैनन् । त्यतिखेर हामीलाई यिनले अपमान गरे भन्ने लाग्छ । चाहे शिक्षकले कक्षामा पढाउँदा होस्, चाहे कुनै कार्यक्रममा वक्ताहरुले बोल्दा होस्, या बाबुआमाले सम्झाउँदा बुझाउँदा ध्यान दिएनन् भने रिस उठेर आउँछ, आप्mनो इगोको सम्मान नभएको महसुस हुन्छ । यति सानो मान्छेले पनि मलाई सुनेन, मैले भनेको मानेन वा मलाई टेरेन भन्ने सोच ठूला मानिसले राखे भने त्यो ठूलो मानिसको सानो सोच हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
बालबालिकाले टेरेनन् भने एकैपटक आवेशमा आइहाल्नुहुँदैन । तिनले हामीले भनेको सबै कुरा मान्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । वरपर छिमेकीका छोराछोरीले वा तपाईँका साथीभाइका छोराछोरीले उनीहरुले भनेका सबै कुरा मान्छन्, तर मेरा छोराछोरीले मैले भनेको मानेनन् । अब यिनलाई कुटपिट र डर, धाकधम्की देखाउनुप¥यो भनेर उनीहरुलाई कठोर सजाय दिनेतिर कहिल्यै लाग्नुहुँदैन । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बालबालिका घरमा निर्भय महसुस गर्छन् । घरका मान्छेसित खुलेर बोल्छन् । बाहिरका मान्छेसित नबोल्ने केटाकेटी पनि घरमा बाबुआमा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीसित खुलेर कुरा गर्छन् । घरमा छोराछोरी कहिल्यै पनि डराउने अवस्था रहनै हुँदैन । घरमा डराए भने कहाँ हो त ढुक्क हुने ? आमाबासित जिस्कन नपाउने हो भने, दाइदिदीसित खुल्न नपाउने हो भने कोसित हो त खुल्ने र रमाउने ? घर डर थप्ने ठाउँ होइन, डर भगाउने ठाउँ हो ।
तर, हामी धेरैजसो बाबुआमा भने बालबच्चा हामीदेखि डराउनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । भनेको मान्ने र डराउने एउटै कुरा होइनन् । केटाकेटी यदि हामीलाई देखेपछि हस्याङफस्याङ गर्ने, भित्र छन् भने बाहिर जाने, लुक्ने गर्दा हामी सफल भएको कहिल्यै ठान्नुहुँदैन । निश्चय पनि बच्चाबच्चीले तपाईंलाई हेप्ने अवस्था भने हुनुहुँदैन । तपाईंले अह्राएका जायज काम पनि यदि तिनले टेरेनन् भने त्यतिखेर सोच्नुपर्ने हुन्छ, तर कहिल्यै पनि कुट्ने, पिट्ने, चुट्ने, लछार्ने, पछार्ने, चिमोट्ने वा भावनात्मकरुपले कमजोर बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।
कठोर अनुशासनमा बस्ने गरेका बालबालिकाको मनोभावना पनि त्यस्तै कठोर हुन्छ । उनीहरु प्रतिशोध राख्ने स्वभावका हुन सक्छन् । निरन्तर पिटाइ खाइरहेका बालबालिका आपूmले पनि अरुलाई त्यसैगरी कुटपिट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने खाले हुन्छन् । हिंसाले हिंसा जन्माउँछ, प्रेमले प्रेम जन्माउँछ । पिट्नेलाई तिनले कहिल्यै आदर गर्दैनन् । अगाडि चुपचाप बस्न सक्छन्, चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्, तर बाबुआमाप्रति वा अन्य अभिभावकप्रति तिनमा सधैँ नकारात्मक भावना कायम रहन्छ ।
मान्छेलाई बदल्ने सबैभन्दा ठूलो सूत्र भनेकै प्रेम र स्नेह हो भनेर बुद्धजस्ता महापुरूषले बताएका छन् । जसले हामीलाई प्रेम गर्छ, स्नेह र चासो दिन्छ उसले भनेका कुरा हामीले काट्न पनि सक्दैनौँ । तिनले कहिल्यै नपिटे पनि हामीलाई उनीहरुसित डर लाग्छ, कर्तव्यको डर, उनीहरुले के भन्लान् भन्ने डर !
आपूmलाई सधैँ स्नेह गर्ने, प्रेम गर्ने, कहिल्यै नपिट्ने व्यक्ति हामीलाई जस्तै बालबालिकालाई पनि मन पर्छ । हिजोआज बालबालिका अत्यन्त अनुशासित थिए, आज उच्छृङ्खल छन् भन्ने कुरा बेठीक पनि छैन । सञ्चारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, उनीहरुले पाएका अवसर, खानपान, साथीसँगी र वरपरको वातावरणले पनि बालबालिका हिजोभन्दा फरक छन्, हुनु पनि पर्छ । आजको बदलिँदो परिवेशमा हाम्रा बच्चाबच्ची पनि हिजोका हामीजस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी ठीक हुन सक्छ ?
बालबालिकामात्रै फेरिएका होइनन्, अभिभावक पनि त फेरिएका छन् ! बाबुआमा सबैभन्दा पहिले बाबुआमाजस्ता हुनुप¥यो । आपूm छाडा भएर हिँड्ने, तर छोराछोरीलाई अनुशासित र आचारवान् बनाउन खोजेर कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले, बालबालिकालाई कुट्ने, पिट्ने, उनीहरुसित विमति भयो अथवा पुस्तान्तरका कारण विचार मिलेन भनेर दुव्र्यवहार गर्ने गर्नाले बालबालिका सुसंस्कृत बन्नुको साटो उग्रताको दिशामा अघि बढ्ने खतरा हुन्छ । उनीहरुलाई प्रेमको हतियार प्रयोग गरी ठीक बाटोमा अघि बढाउनु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । कडा अनुशासन र कुटपिट सबैतिर निषेध गरिएको स्थिति छ ।
आफ्ना नियम र निर्णयलाई बुझाउनुस्
हामीलाई लाग्छ, हाम्रा छोराछोरीले हामीले भनेको मानेनन् अथवा टेरेनन्, तर उनीहरुले सबै कुरा हामीले नै भनेको गरेका हुन्छन् । उनीहरुका रहर जन्मँदा सँगै लिएर आएका होइनन् । यहीँ आएपछि यहाँको वातावरण, घरपरिवार, साथीभाइ, विद्यालय आदिबाट सिकेका हुन् । त्यसोभए तिनले छुट्टै आजसम्म नगरिएको फरक कुरा के गरे त ? तिनले हाम्रा लगभग सबै कुरा मान्छन्, हामीले भनेको सबै मान्छन् र मान्नुपर्छ भन्ने चेत पनि हामीभित्र विकसित भएको छ, तसर्थ यदाकदा नमान्दा हामीलाई केही पनि मानेनन् भनेजस्तो हुनेमात्र हो ।
बालबालिका घरपरिवारकै नमुना हुन् । घरका बाबुआमाबाटै धेरै गुण र विशेषता तिनले जीवनमा पनि ग्रहण गरेका हुन्छन् । यदि कहिलेकाहीँ हाम्रा छोराछोरीले हामीले भनेको मानेनन् भने त्यतिबेला तिनले हाम्रा नियम र निर्णयलाई राम्ररी नबुझेका पनि हुन सक्छन् भन्नेतिर सोचौँ । राम्रोसित नबुझ्दा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अलमल बालबालिकाहरुमा हुन सक्छ ।
हामीले बालबालिकाबाट के चाहन्छौँ ? तपाईंको आशा र अपेक्षा के हो ? छोराछोरीले के–के गर्न हुन्छ, के–के गर्न हुँदैन ? तिनको कर्तव्य के हो ? जस्ता विषयहरुलाई प्रस्टसित बुझाइदिनु आवश्यक हुन्छ । बालबालिकालाई समय–समयमा उनीहरुले बुझ्ने गरी नीति–नियम, मूल्य र आदर्शका कुरालाई बुझाइयो भने त्यसले उनीहरुमा अविचलित लागिरहने बानी विकसित भएर जान्छ । तपाईंका मान्यतामा तपाईं जति स्पष्ट हुनुहुन्छ तपाईंको बाबु अथवा नानी पनि उति नै स्पष्ट भएर जान्छ । बँचेखुचेको द्विविधा पनि बिस्तारै कम हुन थाल्छ । समय बित्दै जाँदा उनीहरु पनि निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्छन्, त्यस अवस्थामा उनीहरुमा पनि उचित निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भएर जान्छ ।
केटाकेटी अलमलिने अर्को समस्या भनेको बाबुआमाको भित्री आशय पहिचान नगर्नु पनि हो । तपाईंको जीवनशैली, जीवनदर्शन, मूल्यमान्यता, आग्रह, परिवारप्रतिको धारणा र सन्तानसितको अपेक्षा तपाईंका बाबुनानीले स्पष्टसित बुझ्न पाउनुपर्दछ । यदि बुझ्न पाएनन् भने तपाईंको आदर्शमा ती कसरी हिँड्न सक्छन् र ? त्यसैले, छोराछोरीसित नीति, नियम, मान्यता र आशा–अपेक्षाहरु बेलाबेलामा शेयर पनि गरिरहनुपर्दछ । मेरो बाबाले यसो भन्नुभएको छ, मेरी आमालाई यो कुरा मन पर्छ, यो मन पर्दैन भन्ने उनीहरुले बुझेपछि त्यसैअनुसार नै ती अघि बढ्छन् ।
हरेक अभिभावकले यसरी नियम, अनुशासन र निर्णयहरुलाई बताइरहँदा सकेसम्म ती सामाजिक स्वार्थप्रेरित, शाश्वत, मूल्यमा आधारित विषयसम्बद्ध होऊन् भन्ने सोच्न सकियो भने आफ्ना सन्तान सङ्कीर्ण र सीमित हुने खतरा पनि कम भएर जान्छ । त्यसकारण बालबालिकालाई आप्mना निर्णय र मूल्यसिद्धान्तलाई सजिलोसित बुझाउन सक्नुपर्दछ ।
बच्चालाई ससम्मान सम्झाउनुस्
यो संसारका हरेक प्राणधारी जीव सहज, स्वाभाविक र सजिलो जीवन चाहन्छन् । कुनै पनि अप्ठ्यारो तिनलाई मन पर्दैन । लठ्ठी देख्दा गाइगोरू, पशुचौपाया सबै भाग्छन् । जङ्गलका चराचुरूङ्गी पनि डरले उड्छन्, हाम्रा हातमा लठ्ठी अथवा गुलेली देखे भने । यो उनीहरु सुरक्षित, सहज र स्वाभाविक हुन खोज्नुको पहिचान हो । बालबालिका पनि असहज अवस्था मन पराउँदैनन् । तिनलाई पनि हरेक कुरामा आनन्द, सम्मान र सहज स्थिति चाहिन्छ ।
बालबालिकाका लागि संसार नौलो हुन्छ । बूढाबूढीका लागि भोग्न केही बाँकी रहँदैन, बालबच्चाका लागि सबैथोक भोग्नै बाँकी छ । तिनको दौडधूप, बसउठ सबै नयाँ–नयाँ अनुभव गर्नका लागि हो । त्यसैले ती कहिले यता त कहिले उता गर्दछन्, कहिले यो चलाउँछन् त कहिले त्यो चलाउँछन् । यही क्रममा तिनले कति गल्ती गर्छन्, कुनै हिसाब हुँदैन । सिकाइ भनेकै गल्ती गर्दै सिक्दै जाने विषय हो ।
बालबालिकाले गरेका गल्तीहरुप्रति आँखा चिम्लिन पनि हुँदैन । कुनै बच्चाले एउटा गल्ती ग¥यो, त्यसप्रति देखेको नदेखेजस्तै गरियो वा त्यो गल्तीका बारेमा बसेर सम्झाइएन भने उसले त्यो गल्ती पुनः दोहो¥याउने सम्भावना रहन्छ । बालबालिकाले गरेका गल्तीहरुलाई सम्झाउन र गल्ती महसुस गराई पुनः त्यही किसिमको गल्ती नदोहो¥याउने सङ्कल्प पनि गराइयो भने उत्तम हुन्छ ।
सम्झाउन त सम्झाउने, तर अत्यन्त सम्मानका साथ । बालबालिकाको पनि मन हो । उनीहरु पनि सम्मानका विषयमा इखालु हुन्छन् । त्यसैले, उनीहरुलाई ससम्मान सम्झाउनु र बुझाउनुपर्छ । ‘ओ, यो के गरेको ? तँलाई पख्, लाज लाग्दैन ? अब गर्छस् कि गर्दैनस् ?’—यस्तो शैलीले कहिल्यै सम्झाउन हुँदैन । ‘बाबु अथवा नानी ! तिमीले आज बगैँचामा फुलेको सुन्दर फूल टिपेछौ । तिम्रो टिप्ने बानी त छैन होला, तर यो फूल धेरै राम्रोसित फुलेको देखेर तिमीलाई सारै मन परेर नै तिमीले टिपेको हुनुपर्दछ । तर, अबदेखि यसरी फूल टिपेर नफाल है ! हेर त फूल फुल्दा कति राम्रो देखिएको छ ! हाम्रो घरमा आउने पाहुना पनि फूल देखेर कति प्रसन्न हुन्छन् ! भोलि ती मान्छे आउँदा यी फूल सबै चुँडिएका देखे भने के भन्लान् ? तिमी पनि त यी फूलजस्तै हँसिला छौ । तिमीलाई कसैले टाउकाको कपाल तानेर चुँड्न खोज्यो भने कति दुःख्छ ? त्यसरी नै, यी फूललाई पनि त दुःख्छ नि, होइन र ? आज पहिलोपटक टिप्यौ । यो फूललाई घरमा लगेर मन्दिरमा चढाऊ । अब भोलिदेखि यी पूmललाई फुलुन्जेल फुल्न देऊ, नटिप ल ! पूmललाई जथाभावी टिप्ने होइन, मुस्कुराउन दिने हो, फुल्न दिने हो ।’— यसरी सम्झाइयो भने बालबालिकाले अवश्य मान्छन् । तर, थर्काउने शैलीमा, गालीगलौच र कुटपिटको शैलीमा वा अपमानको शैलीमा तँतँ—मम गरेर कहिल्यै बालबालिकालाई आपूmले भनेको बाटोमा ल्याउन सकिँदैन ।
जब हामीले नै सम्मानका साथमा सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ र कुराकानी गर्छौं उनीहरुले पनि हामीबाट अरुसित यसरी नै सम्मानका साथ कुराकानी गर्ने तरिकाको सिको गर्छन् । जथाभावीको शैलीमा आवेशमा आएर तिनलाई सम्झाउन खोज्दा उनीहरुले पनि त्यसैगरी अरुसित व्यवहार गर्दछन्, आफूभन्दा सानामाथि अन्याय गर्ने अवस्था आउँछ । हामीले सधैँ सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा बाबुनानी भनेका हामै्र प्रतिच्छाया हुन् । हामीजस्ता छौँ, छोराछोरी उस्तै हुन्छन् । तसर्थ, हामीले ‘छोराछोरी कस्ता ? बाबुआमा जस्ता !’ भन्ने लक्ष्मणरेखाभित्र रहेर उनीहरुको शिक्षादीक्षा र विकासमा योगदान गर्ने प्रयास गरौँ ।